परिवार नियोजनको कुन साधन प्रयोग गरु - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
परिवार नियोजनको कुन साधन प्रयोग गरु
म २५ वर्षीया गृहिणी हुँ । हाम्रो चार महिनाको छोरा छ । मेरो महिनावारी सुरु भएको छैन । मेरो बाबुले दूध खाँदैछ । यो अवस्थामा मैले परिवार नियोजनको कुन साधन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? परिवार नियोजनको साधनले स्तनपान गरिरहेको शिशुको स्वास्थ्यलाई असर त गर्दैन ?
शिशुले स्तनपान गरिरहेको अवस्थामा पनि महिनावारी सुरु नभएसम्म गर्भ रहने सम्भावना न्यून हुन्छ, तर पूर्ण रूपमा भर पर्न सकिँदैन । शिशु राम्रोसँग नहुर्किएसम्म र आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो नभएसम्म अर्को सन्तान जन्माउनु हुँदैन । तपाईंको उमेर २५ वर्ष मात्र भएको र एउटा मात्र सन्तान रहेकाले तपाईंले अस्थायी साधनहरूमध्ये कुनै पनि साधन अपनाउन सक्नुहुन्छ, तर शिशुले स्तनपान गरिरहेको अवस्थामा इस्ट्रोजेन नामक हार्मोन प्रयोग गरिएको खानेचक्की अर्थात् पिल्सचाहिँ रोज्न मिल्दैन । तपार्इंले ईन्प्लान्ट (ज्याडेल) वा तीन महिने सुई (डिपो) प्रयोग गर्न सक्नुहुछ । यी साधनहरूमा हार्मोन प्रयोग गरिए पनि इस्ट्रोजेन प्रयोग गरिएको हुँदैन । त्यस्तै तपाईंले पाठेघरमा राखिने कपर–टी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो १२ वर्षसम्म प्रभावकारी हुन्छ । आफूलाई सन्तानको रहर हुनेबित्तिकै त्यसलाई निकाल्न सकिन्छ । यसमा कुनै हर्मोन प्रयोग नगरिएकाले तपाईंका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।
यौन जीवन : केही तथ्य भाद्र २३, २०७६